देउवा–जबरा जवाफ देऊ सबैलाई पन्छाएर हमाललाई नै मन्त्री नबनाइ नहुने बाध्यता देउवालाई किन पर्‍यो? यत्रो विवाद हुँदाहुँदै पनि हमाललाई मन्त्री बन्नबाट रोक्न नसक्ने त्यस्तो कारण के थियो? के त्यो प्रधानन्यायाधीशको ‘रुचि’लाई क्रस गर्न नसक्नुको परिणाम थियो? या अरु केही कारण? प्रधानमन्त्री देउवाले तत्काल यसको जवाफ दिनुपर्छ। शुक्रबार, असोज २२, २०७८
कस्तो कांग्रेस, कसको कांग्रेस? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनले यसपल्टका लागि सभापति होइन, देशकै आगामी नेतृत्वको चयन गर्नेछ। किनभने झन्डै दुई तिहाईनजिक मत ल्याएकोवाम... आइतबार, असार १३, २०७८